चीन पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक प्याकेजि Sing्ग एकल पुआल निर्माता र कारखाना - QiangAn
घर > उत्पादनहरु > वातावरणीय गर्मी प्रतिरोधी टेबलवेयर र Biopbs पूर्ण रूपमा गिरावट योग्य > पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक प्याकेजि Sing्ग एकल स्ट्रॉ
Kunshan QiangAn इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड चीन मा पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक प्याकेजि single्ग एकल पुआल को एक सीधा बिक्री कारखाना हो। उत्पादन प्रक्रिया प्रदूषण रहित छ, र उत्पादनहरु पर्यावरण मैत्री BIO PBS जैव आधारित पुरा तरिकाले degradable सामाग्री बनेका छन्। BIO PBS सामग्री उच्च र कम तापक्रम (-20 देखि 90 ० डिग्री) को प्रतिरोधी छ, यो प्राकृतिक वातावरण कम्पोस्टि conditions सर्तहरु अन्तर्गत मात्र १ days० दिन पछि बिग्रन सक्छ, र कार्बन डाइअक्साइड र पानी मा विघटित हुन सक्छ, र तब माटो मा गायब हुन्छ, जो धेरै प्रदूषण घटाउँछ र वातावरण को रक्षा गर्दछ। हाम्रो कम्पनी पर्यावरण संरक्षण व्यापार अनुसन्धान र विकास, नवीनता र निर्माण, र गुणस्तरीय सेवाहरु संग हाम्रा ग्राहकहरु लाई प्रदान गर्न को लागी प्रतिबद्ध छ। हाम्रो उत्पादनहरु लाई मुख्य रूप मा खाना ग्रेड चाकू, काँटा, चम्मच, कफी कप lids, पराल, लंच बक्स, प्लेट, आदि ती सबै एमए, CNAS, ILAC-MRA चीन मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मान्यता परीक्षण को खाद्य ग्रेड प्रमाण पारित गरीएको छ र प्रमाणीकरण।
त्यहाँ हाल पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक प्याकेजि single्ग एकल पुआल उत्पादनहरु को तीन प्रकार छन्, एक BIO BPS कच्चा माल बाट बनेको छ, अर्को BIO BPS कच्चा माल बाट बनेको छ खाद्य ग्रेड बांस फाइबर पाउडर, र अन्तिम एक BIO बाट बनेको छ खाद्य ग्रेड कफी पाउडर जोड्ने संग BPS कच्चा माल। यसले बनाउँछ उत्पादन अधिक प्राकृतिक र पर्यावरण मैत्री हुन्छ। यो प्लास्टिक, कागज र नियमित स्ट्रा को लागी एक उत्तम विकल्प हो।
हाम्रो पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक प्याकेजि single्ग एकल पुआल उत्पादन यूरोपीय र अमेरिकी देशहरुमा खाद्य सुरक्षा प्याकेजि of्ग को स्वच्छ आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दछ। यो गैर विषाक्त, बेस्वाद, उच्च तापमान प्रतिरोधी, पर्यावरण मैत्री, सफा, स्वच्छ, सुरक्षित र स्वस्थ छ, र सीधै तातो र चिसो खाना संग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। पेय, फलफूलको रस, दुधको चिया, दूध, सोया दूध, आदि को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ हाम्रो कम्पनीको पुआल बनावट कुनै विरूपण संग चिकनी छ, त्यहाँ सपाट र झुकाएको भुइँ को दुई विशिष्टताहरु छन्। यो धेरै प्रयोग गर्न को लागी सुविधाजनक छ, र उपभोक्ताहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प।
बाँस फाइबर डिस्पोजेबल दूध झुण्डिएको भुइँ
डिस्पोजेबल उत्पादनहरु लाई सुविधाजनक र जनता को जीवन मा कुशल को एक धेरै ल्याएको छ, र यहाँ सम्म कि मानिसहरुको जीवन मा आवश्यक उत्पादनहरु बन्न। के तपाइँ पनी चिन्ता गर्नुहुन्छ कि ती डिस्पोजेबल उत्पादनहरु प्राकृतिक, पर्यावरण मैत्री, सुरक्षित, स्वस्थ, सफा र स्वच्छ हो जब तपाइँ उनीहरु लाई उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो प्रश्न को लागी मात्र सही छौं। हाम्रो कम्पनी बांस फाइबर डिस्पोजेबल दूध तुला स्ट्रो आयातित कच्चा माल BIO PBS, पुरा तरिकाले degradable सामाग्री बनेको छ। वातावरण संरक्षण हामी सबैको बाध्यता हो।
डिस्पोजेबल दूध चाय तेज स्ट्रॉ
हाम्रा उत्पादनहरु लाई मुख्य रूप मा डिस्पोजेबल दूध चिया तेज पराल, खाना ग्रेड चाकू, काँटा, चम्मच, कफी कप lids, पराल, लंच बक्स, प्लेट, आदि शामिल छन्। उच्च गुणस्तरीय सेवाहरु संग ग्राहकहरु। हामी चीन मा तपाइँको दीर्घकालीन साझेदार बन्न को लागी तत्पर छौं।
डिस्पोजेबल दूध तीव्र स्ट्रॉ
डिस्पोजेबल उत्पादनहरु लाई सुविधाजनक र जनता को जीवन मा कुशल को एक धेरै ल्याएको छ, र यहाँ सम्म कि मानिसहरुको जीवन मा आवश्यक उत्पादनहरु बन्न। के तपाइँ पनी चिन्ता गर्नुहुन्छ कि ती डिस्पोजेबल उत्पादनहरु प्राकृतिक, पर्यावरण मैत्री, सुरक्षित, स्वस्थ, सफा र स्वच्छ हो जब तपाइँ उनीहरु लाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो प्रश्न को लागी मात्र सही छौं। हाम्रो कम्पनी डिस्पोजेबल दूध तीखो आयातित कच्चा माल BIO PBS, पुरा तरिकाले degradable सामग्री बनेको स्ट्रॉइस। वातावरण संरक्षण हामी सबैको बाध्यता हो।
डिस्पोजेबल पेय तीव्र स्ट्रॉ
हाम्रा उत्पादनहरु लाई मुख्य रूप मा डिस्पोजेबल पेय तेज भूसे, खाना ग्रेड चाकू, कांटा, चम्मच, कफी कप lids, पराल, लंच बक्स, प्लेट, आदि शामिल छन्। उच्च गुणस्तरीय सेवाहरु संग। हामी चीन मा तपाइँको दीर्घकालीन साझेदार बन्न को लागी तत्पर छौं।
डिस्पोजेबल फल को रस तेज स्ट्रा
डिस्पोजेबल उत्पादनहरु लाई सुविधाजनक र जनता को जीवन मा कुशल को एक धेरै ल्याएको छ, र यहाँ सम्म कि मानिसहरुको जीवन मा आवश्यक उत्पादनहरु बन्न। के तपाइँ पनी चिन्ता गर्नुहुन्छ कि ती डिस्पोजेबल उत्पादनहरु प्राकृतिक, पर्यावरण मैत्री, सुरक्षित, स्वस्थ, सफा र स्वच्छ हो जब तपाइँ उनीहरु लाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो प्रश्न को लागी मात्र सही छौं। हाम्रो कम्पनी डिस्पोजेबल फल को रस तेज strawis आयातित कच्चा माल BIO PBS बाट बनेको छ, पुरा तरिकाले degradable सामग्री। वातावरण संरक्षण हामी सबैको बाध्यता हो।
डिस्पोजेबल चिया तेज स्ट्रॉ पेय
डिस्पोजेबल उत्पादनहरु लाई सुविधाजनक र जनता को जीवन मा कुशल को एक धेरै ल्याएको छ, र यहाँ सम्म कि मानिसहरुको जीवन मा आवश्यक उत्पादनहरु बन्न। के तपाइँ पनी चिन्ता गर्नुहुन्छ कि ती डिस्पोजेबल उत्पादनहरु प्राकृतिक, पर्यावरण मैत्री, सुरक्षित, स्वस्थ, सफा र स्वच्छ हो जब तपाइँ उनीहरु लाई उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी मात्र यो प्रश्नको लागी सही छौं। हाम्रो कम्पनी डिस्पोजेबल चिया आयातित कच्चा माल BIO PBS, पुरा तरिकाले अपमानजनक सामाग्री बनेको तेज strawis पिउँछ। वातावरण संरक्षण हामी सबैको बाध्यता हो।
QiangAn चीन मा एक प्रसिद्ध पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक प्याकेजि Sing्ग एकल स्ट्रॉ निर्माताहरु हो। उच्च गुणस्तर पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक प्याकेजि Sing्ग एकल स्ट्रॉ चीन मा बनेको छ हाम्रो कारखाना बाट सस्तो मूल्य संग अनुकूलित गर्न सकिन्छ। जब सम्म तपाइँ उत्पादनहरु जान्न चाहानुहुन्छ, हामी योजना संग एक संतोषजनक मूल्य प्रदान गर्न सक्छौं। हाम्रो कारखाना बाट, तपाइँ न केवल उन्नत उत्पादनहरु, तर नयाँ उत्पादनहरु पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ हाम्रा उत्पादनहरु मा रुचि राख्नुहुन्छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तुरुन्तै, हामी तपाइँ एक उद्धरण प्रदान गर्नेछौं।